Isikhathi esining impela, amantombazane nabathwebuli bazithole amaphutha futhi zixazululwe ezintweni yenza ngokuphelelwa yithemba, ukuhlola ngokudla kancane ukubukeka kwakhe. Esikhathini nabesifazane, kanye ezisontekile kuyinkinga OKUPHAKADE ukulungiswa kwananoma kwabo. Ngenhlanhla noma cha, namuhla angathengwa utyuzhok salokhu inqubo bese uwasebenzise okungenani izikhathi eziningana ngosuku. Kodwa ingabe kuwukuphela kwesinyathelo nomthelela omuhle ku izinwele zethu? Indlela elula izinwele ngaphandle straightener? Kuyinto real, futhi ngemva nje inqubo futhi kwenza kwekhanda ephelele ngaphandle kokudala umonakalo.
Isinyathelo sokuqala sokuthola amathuluzi adingekayo. Namuhla, nganoma isiphi yokugunda noma okukhethekile esitolo, ungakwazi ukuthenga imikhiqizo esikhethekile izinwele. A umehluko elincane intengo, kodwa izinga - omkhulu. Namanje ngizibuza indlela qondanisa izinwele ngaphandle straightener? Khona-ke ngekhanda. Shampoo, conditioner, ukhilimu, spray, air conditioning - konke okuyizinto ukusiza ukwenza kwafezeka iphupho lokuphila kwami (Yiqiniso, udinga ukuthenga amathuluzi esikhethekile inkinga yethu). Khona-ke isicelo makeup njalo izinwele ezimanzi, ukuze bakwazi ukungena shí isakhiwo. Kodwa Ungeqisi it, kukhona mkhawulo. Futhi manje ungumsindisi main - dryer izinwele - okungcono izinwele straightener. Lokho kuyokusiza ukuba sifinyelele elamukelekile, kanye nesibekandzaba emoyeni obandayo nhlobo kuyoba usizo, hhayi kokulimaza "ngcebo" yethu.
Ukuze uthole isitayela ngempumelelo, hlukanisa izinwele zakho ku izingcezu ezincane. Ngamunye wabo kahle ome dryer izinwele, ungakwazi ukusonta emikhawulweni ikamu isiyingi. Donsa imicu ngamunye ngamunye, enikeza ngalinye ukunakwa ngenxa. I ukushuba we shayela kuncike ubude izinwele. Mhlawumbe okokuqala ngeke vela izinwele enhle kunazo zonke emhlabeni, kodwa ungakhathazeki: into esemqoka - umkhuba.
Indlela elula izinwele ngaphandle straightener uma kungukuthi basonta kakhulu? Kungenzeka ukwenza lokhu ngaphandle kokusebenzisa dryer izinwele. Ukuze wenze lokhu, nje kudingeka Thenga kakhulu imikhiqizo "efanele" yezimonyo ezilungele izinwele zakho uhlobo. Professionals ukuncoma ukusebenzisa eziyinkimbinkimbi, kuyaphumelela kakhulu futhi umphumela uba isikhathi eside. Qaphela, uma nezinwele anemibala, izimali ongaqhuba kabi, futhi ngeke ucabange ukuthi baye bakhohliswa. Ukuze ugweme lokhu, ungalilahli ithemba bese uzama kaningi. Ngolunye usuku uzothola okudingayo.
Kunezindlela sendlela qondanisa izinwele ngaphandle straightener. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa njalo ephezulu Vitamin buso kusuka amafutha (ephumelela kunazo: burdock, omnqumo ocolisekileyo). Kufanele zisetshenziswe phezu obuphelele yonke izinwele, ngamunye izinwele ngeke ukuqonda yonke izakhi, ngakho-ke iyoba nzima futhi uyakwelula.
Uma ngisho akakwazi makalahle ukusetshenziswa rectifier, lesi yisinqumo sakhe kuphela. Kukholakala ukuthi iyingozi, futhi ngemva umthelela kuncane kudingeke zishintshe. Kodwa ochwepheshe abathi ukuthi insimbi izinwele "Roventa" imisebenzi kabuthaka nangokuthula ngokucophelela ngangokunokwenzeka awukudla izinwele. Futhi abacaphuni Kuhle ukukhumbula ukuthi amanye amantombazane akuzona njengoba bejabule njengoba bakulungele ukulala ubusuku bonke ngefaskamu ukuthola curls amahle. Mhlawumbe thina Akufanele athinte ukuthi lapho imvelo awanikeze?
Corrector "Estelle": ulwazi mayelana nomkhiqizo, ububanzi, ukusetshenziswa
Izinwele Okuxekethile nge pigtail: ongakhetha zezinwele
Indlela yokwenza Cornucopia
Kanjani ukuthuthukisa telekinesis? Kungenzeka yini ukuthuthukisa isipho telekinesis?